मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै ढल्यो ओलीको दोस्रो सत्ता, लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रको दबदबा ! « On Khabar
मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै ढल्यो ओलीको दोस्रो सत्ता, लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रको दबदबा !
दोस्रो केपी ओलीको उपमा पाएका शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्रीबाट सत्ताच्युत भएका छन्, अन्तिमसम्म सत्ता जोगाउन लागिपरेका उनको सबै विकल्प सकिएसँगै सत्ता छोड्ने बाध्यात्मक निर्णयमा पुगेका हुन्, उनको राजीनामापछि राजनीतिक वृत्तमा ओलीको दोस्रो सत्ता ढलेको विश्लेषण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको छ । पदबाट राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उनले आउने नेतृत्वलाई सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका रुपमा कर्मचारीसँगको अन्तिम भेटमा पोखरेलले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका कामरहरुको फेहरिस्त सुनाए । उनले आफ्नो कार्यकालमा सरकारले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दावी गरे ।
सरकारले हालसम्म हासिल गरेका कामहरुले आउने नेतृत्वले पछ्याउन मिल्ने गरी खाका तयार पारेको उनले बताए । उनले भने(ुयी यो मेमोरीलाई प्रदेश सरकारका संरचनाले निरन्तरता दिएमा प्रदेश अगाडी बढ्ने छ ।ु
उनले प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि गुरुयोजना निर्माण भइरहेको बताउँदै यसलाई सरकारको ठूलो सफलताका रुपमा उनले चित्रित गरे । साथै उनले प्रदेशको पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने सामार्थ्य बढेर गएको बताए ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले बोलेपछि मुख्यमन्त्रीको जवाफका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको जवाफका लागि प्रदेशसभा स्थगित गरेका बेला उहाँको राजीनामाबारे जानकारी आयो, अब प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं’ प्रदेशसभा सचिव पुनले बताए ।उनका अनुसार अब विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने वा स्थगित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
पोख्रेलको राजीनामापछि यता माओवादी केन्द्रको दबदबा हुने देखिएको छ, हालका सभामुख, नवनियुक्त हुने मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी सहित हालका प्रदेश प्रमुख समेत माओवादी केन्द्रकै सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन । यसरी हट्रिक गर्न लागेको माओवादीको सत्ता भने ८ महिनामात्रै रहन्छ, त्यसपछि फेरी कांग्रेसको पोल्टामा मुख्यमन्त्री जाने भद्र सहमति दुवै दलको भैसकेको छ । गठबन्धन धेरै नटिक्ने नेपाली राजनीतिमा यि दलका गठबन्धनहरुले कहिलेसम्म काम गर्नेहुन त्यो भने भविष्यवाणी गर्न सकिदेैन ।